Nucleus Accumbens ရှိ Oxytocin Receptor Density ပြောင်းလဲမှုသည် Monogamous နှင့် Polygamous Voles များနှင့်တွဲဖက်ထားသောအပြုအမူများအပေါ်ကွဲပြားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိသည်။
နျူကလီးယပ် Accumbens အတွက် oxytocin receptor Density အတွက်အပြောင်းအလဲ Monogamous နှင့်ဇနီးတစ်ယောက်ထက် ပို. Voles (2009) တွင် Affiliate အပြုအမူအပေါ် Differential သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်
J ကို neuroscience ။ စာရေးသူလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်; PMC အောက်တိုဘာ 27, 2009 အတွက်ရရှိနိုင်ပါ။
J ကို neuroscience ။ ဖေဖော်ဝါရီ 4, 2009; 29 (5): 1312-1318 ။
Doi: 10.1523 / JNEUROSCI.5039-08.2009
ဟဲလ်အီးရော့စ်,1 Sara အမ် Freeman က,1 Lauren အယ်လ် Spiegel,1 Xianghui Ren,2 Ernest အက်ဖ် Terwilliger,2 နှင့် လာရီဂျေ Young က1,3
နျူကလီးယပ် accumbens အတွက် oxytocin receptors ဟာလူမှုရေးအရ monogamous မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole အတွက် alloparental အပြုအမူနှင့် pair တစုံနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းခြင်း၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများတွင်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရပြီ။ နျူကလီးယပ်အတွက် oxytocin အဲဒီ receptor သိပ်သည်းဆအပြုသဘောလူငယ်နှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက် alloparenting ဆက်နွယ်နေကြောင်းဖြစ်ပါတယ် accumbens, နှင့်နျူကလိယသို့ထုံမွှန်း oxytocin အဲဒီ receptor ရန်လုပ်ကွက်ဒီအပြုအမူ accumbens ။ ထို့အပြင်မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles Non-monogamous ကြွက်မျိုးစိတ်ထက် accumbens အတွက် oxytocin receptors မြင့်မားထုရှိသည်, accumbal oxytocin receptors ပိတ်ဆို့ခြင်းမိတ်လိုက်-သွေးဆောင်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းကာကွယ်ပေးသည်။ ဤတွင်ကျွန်တော်မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာနှင့်မြက်ခင်း voles အတွက် accumbal oxytocin အဲဒီ receptor သိပ်သည်းဆနှင့်လူမှုရေးအပြုအမူအကြား functional relationship ဆနျးစစျဖို့ adeno-ဆက်စပ်ဗိုင်းရပ်စ်အားနည်းချက်ကိုဗီဇလွှဲပြောင်းအသုံးပြုခဲ့သည်။ နျူကလီးယပ် accumbens အတွက် Over-အမြန် oxytocin အဲဒီ receptor အရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အထီးနှင့်အတူတွဲပြီးပြီးနောက်အရှိန်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းပြသပေမယ့်တိုးမြှင့် alloparental အပြုအမူမပြခဲ့ပါဘူး။ သို့သော်မိတ်ဖက် preference ကိုနျူကလီးယပ် accumbens သို့ oxytocin အဲဒီ receptor မိတ်ဆက်နေဖြင့် Non-monogamous မြက်ခင်း voles အတွက် facilitated မခံခဲ့ရပါဘူး။ ဤရွေ့ကားဒေတာအမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်မိတ်ဖက်ဦးစားပေး၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတွက် accumbens အတွက် oxytocin အဲဒီ receptor များအတွက်အခန်းကဏ္ဍအတည်ပြု, နှင့် accumbens အတွက် oxytocin အဲဒီ receptor စကားရပ်သည် non-monogamous မျိုးစိတ်အတွက်မိတ်ဖက်ဦးစားပေးမြှင့်တင်နိုင်ရန်လုံလောက်သောမဟုတ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဤရွေ့ကား data တွေကိုလူမှုရေးပူးတွဲဖိုင်ကိုအပြုအမူတွေအတွက်နျူကလိယ accumbens နှင့်အပြောင်းအလဲအတွက် oxytocin အဲဒီ receptor သိပ်သည်းဆအကြားတိုက်ရိုက်ဆက်ဆံရေးမျိုးကိုသရုပ်ပြဖို့ပထမဦးဆုံးဖြစ်ကြသည်။ ထို့ကြောင့် striatum အတွက် oxytocin အဲဒီ receptor စကားရပ်များတွင်တစ်ဦးချင်းစီအပြောင်းအလဲလူမှုရေးအပြုအမူတွေသဘာဝမတူကွဲပြားမှုကိုအထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။
keywords: မိခင်, ဗိုင်းရပ်စ်, preference ကို, neuropeptide, သိမှတ်ခံစားမှု, autoradiography
Microtine ကြွက်အတော်လေး asocial နှင့်ကရာမိတ်လိုက်မဟာဗျူဟာများ (ရန်အလွန်အမင်း Affiliate နှင့်လူမှုရေးအရ monogamous ကနေအထိ, လူမှုရေးအပြုအမူတွေအတွက်ထူးခြားတဲ့မတူကွဲပြားမှုဖော်ပြရန်Gruderadams နှင့် Getz, 1985) ။ အဆိုပါလူမှုရေးအရ monogamous မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole (Microtus ochrogasterNon-monogamous မြက်ခင်း voles စဉ်တွဲပြီးနှင့်မိတ်လိုက်အောက်ပါတခုဆန့်ကျင်ဘက်-လိင်မိတ်ဖက်ဖို့, လူမှုရေး attachment များကို, ဒါမှမဟုတ်တစ်စုံခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်အမြဲတည်သော) ပုံစံများ (Microtus pennsylvanicus) ပုံမှန်အားဖြင့်မကျင့်။ အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles ကျန်ရှိသောလျစ်လျူရှုသို့မဟုတ်တိုက်ခိုက်မှုခွေးများ (ဖြစ်စေနေစဉ်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ထက်ဝက်ခွေးများဆီသို့မိခင်ကဲ့သို့အပြုအမူဖေါ်ပြခြင်းနှင့်အတူ၎င်းတို့၏အလိုအလျောက်ပွားအပြုအမူအတွက်စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာမတူကွဲပြားမှု, ဒါမှမဟုတ် alloparental အပြုအမူဖော်ပြရန်လိင်ရင်တော့မှားမယ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူLonstein နှင့် De Vries, 1999; Bale နှင့် Carter က, 2003; Olazabal နှင့်လူငယ်တို့, 2005) ။ ထို့ကြောင့် voles မျိုးစိတ်တလွှားနှင့်တစ်ဦးချင်းစီအကြားနှစ်ဦးစလုံးလူမှုရေးကို attachment နဲ့ alloparental စောင့်ရှောက်မှုအခြေခံဟာ neurobiological ယန္တရားများအဖြစ်ကဤအပြုအမူမှာမတူကွဲပြားမှုတွေမှဦးဆောင်သည့်ယန္တရားဆနျးစစျဖို့အကောင်းဆုံးအခွင့်အလမ်းကိုပေး။
အဆိုပါ nonapeptide oxytocin (OT) မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် alloparental အပြုအမူနှစ်ဦးစလုံး၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများတွင်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရခဲ့သည်။ နျူကလီးယပ် accumbens (NACC) သို့ပေမယ့်မရအဖော်ရှာ-သွေးဆောင်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းကပ်လျက် caudate putamen လုပ်ကွက်သို့တစ်ဦး oxytocin အဲဒီ receptor (OTR ကို) ရန်, pair တစုံနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းရေးတစ်ဓာတ်ခွဲခန်း proxy ကို (၏ပြုတ်ရည်လူငယ်တို့ et al ။ , 2001) ။ အဆိုပါ NACC သို့ OTR ကိုရန်အလားတူတာဟာကညာအမျိုးသမီးအတွက် alloparental အပြုအမူကိုလည်းပိတ်ဆို့ (Olazabal နှင့်လူငယ်တို့, 2006b) ။ အရှင် NACC အတွက် OTRs ၏ activation အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် alloparental အပြုအမူနှစ်ဦးစလုံးနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်။
အဆိုပါ NACC အတွက် OTR ကိုသိပ်သည်းဆအတွက်အပြောင်းအလဲလူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းနှင့် alloparental အပြုအမူအတွက်မျိုးစိတ်ကွဲပြားမှုကိုအထောက်အကူပြုဖို့တွေးဆခဲ့သည်။ Non-monogamous မြက်ခင်း voles, ကြွက်နှင့်ကြွက်မကျင့်စဉ်ကိုင်းတောကွင်း voles (က, NACC အတွက်နဲ့ OTR ၏သိပ်သည်းဆမြင့်ပြီInsel နှင့် Shapiro, 1992; Olazabal နှင့်လူငယ်တို့, 2006a) ။ မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles လည်းမြက်ခင်း voles, ကြွက်သို့မဟုတ်ကြွက် (ပြုပါထက် alloparental အပြုအမူများပိုမိုမြင့်မားအဆင့်ဆင့်ကိုပြသOlazabal နှင့်လူငယ်တို့, 2006a) ။ အဆိုပါ NACC အတွက် OTR ကိုသိပ်သည်းဆနှင့်မိဘ၏အပြုအမူအကြားဒီကြားမျိုးစိတ်ကြားဆက်ဆံရေး Paralleling, အ NACC အတွက် OTR ကိုသိပ်သည်းဆအပြုသဘော (နှစ်ဦးစလုံးလူငယ်နှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက် alloparental အပြုအမူဆက်နွယ်နေကြောင်းဖြစ်ပါတယ်Olazabal နှင့်လူငယ်တို့, 2006b, a) ။ ဒီလေ့လာမှုမှာကျနော်တို့ adeno-ဆက်စပ်ဗိုင်းရပ်စ် vector ကိုအသုံးပြုတိုက်ရိုက် NACC OTR ကိုသိပ်သည်းဆအတွက်ယူဆချက်ကြောင့်အပြောင်းအလဲစမ်းသပ်ဖို့ (AAV) မျိုးဗီဇလွှဲပြောင်းလူမှုရေးကို attachment နဲ့ alloparental အပြုအမူအတွက်အပြောင်းအလဲအထောက်အကူပြုနိုင်ပါတယ်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles မြန်မာနိုင်ငံသ binding OTR ကိုတစ်ဦးသိသိသာသာမြင့်အတွက်ရရှိလာတဲ့, မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole OTR ကိုဗီဇကုဒ်သွင်းထားတဲ့ AAV အတူ NACC သို့ထုံမွှန်းခဲ့ကြသည်။ တိရစ္ဆာန်များထို့နောက် alloparental အပြုအမူများနှင့်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းအဘို့စမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့ကြသည်။ ကျနော်တို့ထို့နောက် NACC အတွက်နဲ့ OTR စကားရပ်အတူတူအားနည်းချက်ကိုနှင့်အတူအမျိုးသမီးမြက်ခင်း voles infusing အားဖြင့်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းလွယ်ကူချောမွေ့ရန်လုံလောက်သောသောအယူအဆစမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။ ကျနော်တို့ထိန်းချုပ်မှုရန်, OTR ကို Over-ဖော်ပြအမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles တိုးလာ alloparental အပြုအမူနှင့်အရှိန်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းကိုပြသမယ်လို့နှိုင်းယှဉ်ကြောင်းခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။ ထို့အပွငျကြှနျုပျတို့အ NACC အတွက် OTR ကိုဖော်ပြမြက်ခင်း vole အမျိုးသမီးအထီးမိတ်ဖက်ဆီသို့ဖက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မယ်လို့ခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။
မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာနှင့်မြက်ခင်း voles အသက် 2-3 ရက်ပေါင်းမှာနို့၏အချိန်ကနေ 21-23 voles / လှောင်အိမ်တွေနဲ့အတူတူလိင်အုပ်စုများ၌ကျိန်းဝပ်ခဲ့ကြသည်။ အစားအစာမှဝင်ရောက်ခွင့် (ယုန် LabDiet, Richmond, IN) နှင့်ရေကြော်ငြာ libitum နှင့်အတူ 36 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာ 18 နာရီအလင်း / မှောင်မိုက်သံသရာ: အိမ်ရာတစ်ဦး 19 အောက်တွင်အိပ်ရာ-ocobbs ဓာတ်ခွဲခန်းတိရစ္ဆာန်အိပ်ယာနှငျ့ပွညျ့စုံတစ်လေဝင်လေထွက် 14 × 10 × 22cm Plexiglass လှောင်အိမ်ပါဝင်သည် ။ မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles မူလကအီလီနွိုက်ပြည်နယ်အတွင်းရှိလယ်ကွင်း-ဖမ်းမိ voles မှဆင်းသက်လာသောငါတို့ဓာတ်ခွဲခန်းမွေးမြူရေးကိုလိုနီများထံမှရရှိသောခဲ့ကြသည်။ Meadow ဟာ voles ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်တက္ကသိုလ်မှမွေးမြူရေးကိုလိုနီများထံမှရရှိသောစတော့ရှယ်ယာမှဆင်းသက်လာခဲ့သည်။ ဘာသာရပ်များ 2-5 လဟောင်းများကိုနဂိုအတိုင်းလိင်ရင်တော့မှားမယ်အမျိုးသမီး voles ခဲ့ကြသည်။ stimulus တိရိစ္ဆာန်များလိင်အတွေ့အကြုံရှိအရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီး voles ခဲ့ကြသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုအထီးကို "လက်တွဲဖော်" နှင့်မိတ်ဖက် preference ကိုစမ်းသပ်နေစဉ်အတွင်းတစ်ဦး "လူစိမ်း" (အောက်တွင်ကြည့်ပါ) အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ Littermates အမှိုက်သရိုက်များအတွင်းနှင့်အိတ်များအတွင်းအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲဘို့ထိန်းချုပ်ဖို့ကွဲပြားခြားနားသောကုသမှုအုပ်စုများမှတာဝန်ကျတယ်။ အားလုံးလုပျထုံးလုပျနညျးဟာ Emory တက္ကသိုလ် Institutional တိရိစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုကော်မတီကအတည်ပြုပေးခဲ့သည်။
အဆိုပါ OTR ကို coding sequence ကိုပထမငါး transmembrane domains များကုဒ်သွင်းနေတဲ့မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole OTR ကို Genomics ကိုယ်ပွား၏ပထမဦးဆုံး exon splicing အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးခဲ့ပါတယ် (Genbank ်အရေအတွက်က AF079980) နှင့်မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole သားအိမ် cDNA ထံမှ amplified တာနဲ့ OTR ၏3'' အဆုံး။ code ကို sequence ကိုပု UTRs ပပျောက်နှင့် AAV အားနည်းချက်ကို plasmid သို့ကိုယ်ပွားလွယ်ကူချောမွေ့အသစ် flanking ကန့်သတ်က်ဘ်ဆိုက်များပေး PCR သုံးပြီး re-ရှုမြင်သုံးသပ်ကြဖြစ်ခဲ့သည်။ ပြုပြင်ထားသောဗီဇထို့နောက်2kb cytomegalovirus (CMV) ကမကထနှင့် SV0.6 အသေးစား t ကို intron နှင့် polyA signal ကိုင်တစ်ဦး SV40 DNA ကိုအပိုင်းအစအကြားတစ်ဦး AAV40 အားနည်းချက်ကို plasmid သို့ပုံတူမျိုးပွားခဲ့သည်။ အဆိုပါ AAV2-OTR ကိုစံကယ်လစီယမ်ဖော့စဖိတ်မိုးရွာသွန်းမှုနည်းလမ်းကိုသုံးပြီး AAV9 ဆဲလ် (Stratagene,, La Jolla, CA) သို့တစ်သုံးဆ plasmid transfection အားဖြင့် AAV293 အတွက် Cross-ထုပ်ပိုးခဲ့သည်။ အဘယ်သူမျှမအထောက်အဗိုင်းရပ်စ်အလုပ်ခံခဲ့ရသည်။ တစ်ဦး AAV2-eGFP plasmid တစ်အနုတ်လက္ခဏာကိုထိန်းချုပ်အားနည်းချက်ကိုအဖြစ် AAV9 အတွက်အပြိုင်အတွက်ထုပ်ပိုးခဲ့သည်။ အတိုချုပ်တစ်ဦးချင်းစီ AAV အားနည်းချက်ကို plasmid, AAV2 replicase နှင့် AAV9 capsid လုပ်ဆောင်ချက်များကိုပံ့ပိုးထားတဲ့ AAV2 /9ကိုယ်စားလှယ် / ဦးထုပ် plasmid နှင့် 3rd Adenovirus အထောက်အလုပ်ဆောင်ချက်များကိုကုဒ်သွင်း plasmid, pHelper (Stratagene), 293 တစ်ဦးအံအချိုးမှာ 1 ဆဲလ်သို့ Co-transfected ခဲ့ကြသည်: 1: 1 ။ ဆဲလ် 48 နာရီ Post-transfection ရိတ်သိမ်းခံခဲ့ရသည်။ အဆိုပါကလာပ်စည်းလုံးလေးများ DMEM အတွက် re-ဆိုင်းငံ့ပြီးတော့ ရှိ. , မှုန်ဖယ်ရှားပစ်ရန်စားပွဲတစ်ခု-ထိပ်တန်း centrifugal အပေါ် 13,000 မိဘို့ 10 rpm မှာ centrifugal အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်အေးခဲ-နွေးထွေးသုံးခုဆက်တိုက်ကျည်ဖြင့်ဖြန့်ချိသည့် intracellular ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးမှုန်။ အဆိုပါအားနည်းချက်ကိုထိတ် -80 ကို C မှာသိမ်းဆည်းထားနှင့် Perkins-အဲလ်အသုံးချ Biosystems (Foster စီးတီး,, CA) မှတစ်ဦး ABI Prism ကို 7700 အဆက်မပြတ်ထောက်လှမ်းစနစ်သုံးပြီး real-time PCR အားဖြင့် titered ခဲ့ကြသည်။ Titers 10 ၏အမိန့်အပေါ်ခဲ့ကြသည်12 DRP / ml ။ (DRP = Dnase ကိုခံနိုင်ရည်အမှုန်များ) ။
ဗိုင်းရပ်စ် Vector ပြုတ်ရည်
Stereotaxic တာဟာတစ် Kopf အတွက် isoflurane မေ့ဆေးအောက်တွင်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြကာက Ultra Micro နဲ့ Pump II ကို (ကမ္ဘာ့ Precision တူရိယာ, Sarasota, FL) နှင့်တစ်ဦး 26-gauge Hamilton ကပြွတ်တပ်ဆင် stereotax ။ အဆိုပါ vole င်တစ်ဦး AAV ဖြစ်စေ၏ 1.7nl နှင့်အတူအမျိုးသမီးအဆိုပါ NACC (: AP + 9mm, ML .4.5mm, DV -1.6mm, မြက်ခင်း voles AP + 9mm, ML .4.3mm, DV -750mm မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles) ၏ shell ကိုသို့မြန်မာနိုင်ငံသထိုးသွင်းခဲ့ကြ oxytocin အဲဒီ receptor (CMV-OTR ကို, N ကို = 12), သို့မဟုတ်တစ်ထိန်းချုပ်မှု eGFP အားနည်းချက်ကို (CMV-GFP, N ကို = 16) ဖော်ပြ။ ဗိုင်းရပ်စ် 93.8nl / မိနစ်တစ်မှုနှုန်းမှာထုံမွှန်းခဲ့သည်။ အဆိုပါပြွတ်အားနည်းချက်ကိုတက်အပ်လမ်းကြောင်း၏ပျံ့နှံ့ minimize လုပ်ဖို့ပြုတ်ရည်ကိုအောက်ပါ5မိဘို့ရာအရပျ၌ကနျြခဲ့သညျ။ အတုအယောင် operated တိရိစ္ဆာန်များ (N ကို = 9) anesthetized ခဲ့ကြသည်နှင့်သူတို့၏ဦးရေပြား incised နှင့် sutured ခဲ့သည်။ ခွဲစိတ်ကုသပြီးနောက်တိရိစ္ဆာန်များမိတ်ဖက် preference ကိုအပြုအမူစမ်းသပ်ခြင်း၏အချိန်ကာလမရောက်မှီတိုင်အောင်သျောအုပ်စုတစ်စုရှိကြ၏။ အကြိုလေ့လာမှုများဆေးထိုး၏ site မှာ OTR ကိုစကားရပ် 10 ရက်အကြာမှာတည်ငြိမ်ခဲ့ကြောင်းညွှန်ပြ။
ဆေးထိုးပြီးတစ်လအကြာမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles alloparental အပြုအမူများအတွက်စမ်းသပ်ပြီးခဲ့ကြသည်။ စစ်ဆေးခြင်းသည် 0800hr နှင့် 1800hr အကြားတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ စမ်းသပ်တိရိစ္ဆာန်များကိုသန့်ရှင်းသောလှောင်အိမ်ကြီး (45.5 × 24 × 20cm) တွင်နေရာချပြီး 15 မိနစ်ခန့်အကြာတွင်နေထိုင်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ကလေးနှစ်ယောက် (အသက် ၂-၅ ရက်) သည်လှောင်အိမ်တစ်ခု၏အဆုံးတွင်ရှိသည်။ ခလေးများထံချဉ်းကပ်ရန်အောင်းနေချိန်၊ ကလေးများကိုတိုက်ခိုက်သည့်တိရိစ္ဆာန်အရေအတွက်နှင့်ဖြုန်းတီးခြင်း၊ လှုပ်ရှားခြင်းနှင့်အရုပ်များပြန်လည်ရယူခြင်းအတွက်အချိန်ဖြုန်းခြင်းတို့ကိုမှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ ကိန်းဂဏန်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်အတွက်2မိနစ်စမ်းသပ်မှုကာလအတွင်းခွေးချဉ်းကပ်မတိရိစ္ဆာန်များမှစက္ကန့်5၏တစ် ဦး ကအောင်းနေချိန်သတ်မှတ်ထားသောခဲ့သည်။ အမြိုးသမီးကခွေးများကိုတိုက်ခိုက်လျှင်စမ်းသပ်ခြင်းကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ခဲ့သည်။ အကယ်၍> စက္ကန့် ၃၀ ကြာအောင်အကာအကွယ်မရှိဘဲခွေးများကိုလျက်နေလျှင်တိရစ္ဆာန်များကို Alloparental ဟုသတ်မှတ်သည်။ မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles နှင့်အတူစမ်းသပ်မှုကနေရလဒ်အပေါ်အခြေခံပြီး, မြက်ခင်း voles alloparental အပြုအမူများအတွက်စမ်းသပ်စစ်ဆေးမခံခဲ့ရပါ။
မိတ်ဖက်ဦးစားပေးမှုစမ်းသပ်ခြင်း (Prairie Vole)
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Reception သွေးဆောင်ဖို့ကြိုတင်မိတ်လိုက်ရန်4နေ့ရက်ကာလအဘို့နေ့စဉ်နှမ်းရေနံအိုင်ပီ၏ 0.1ml အတွက်ဖျက်သိမ်း၏ alloparental အပြုအမူစမ်းသပ်ခြင်းအောက်ပါတစ်လနှင့် AAV ပြုတ်ရည်ကိုအောက်ပါနှစ်လ, အမျိုးသမီး estradiol benzoate (Fisher သည်, Pittsburg, PA ဆိုပြီး eb) ၏3μgပေးခဲ့ ။ ပြီးခဲ့သည့် eb ဆေးထိုးတိရိစ္ဆာန်များအောက်ပါ 16 နာရီ 28 နာရီများအတွက်လိင်အတွေ့အကြုံရှိအရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးနှင့်အတူတစ်စင်ကြယ်သောလှောင်အိမ် (17 × 12 × 6cm) တွင်ထားရှိပြီးတော့အုပ်စုတစ်စုအိမ်ရာမှပြန်လာသောခဲ့ကြသည်။ မိတ်လိုက်အပြုအမူကနဦး6နာရီ Co-ကျိန်းဝပ်ကာလအတွင်းမှတ်တမ်းတင်ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးတစ်နာရီအတွင်းပထမဦးဆုံး intromission နှင့်မိတ်လိုက်အကြိမ်ကြိမ်၏နံပါတ်ဖို့အောင်းနေချိန်သွင်းယူခဲ့ကြသည်။ 3600 စက္ကန့်များ၏တစ်ဦးအောင်းနေချိန်စာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၏ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် 1 နာရီကာလအတွင်းမိတ်မတိရိစ္ဆာန်များမှတာဝန်ကျတယ်။ အောက်ပါနံနက် (ထိုတွဲပြီးပြီးနောက် 14 နာရီ), တိရစ္ဆာန်မိတ်ဖက် preference ကိုများအတွက်စမ်းသပ်ပြီးခဲ့ကြသည်။ တစ်ဖက် preference ကိုစမ်းသပ်မှုများတွင်စမ်းသပ်အမျိုးသမီးအတွက်မိတ်ဖက်အထီးတစ်ဖက်အခန်း tethering သည်နှင့်တစ်ဝတ္ထု "လူစိမ်း" အထီး (အခြားများတွင်ချိတ်တွဲဖြစ်သည့်အတွက်သုံး Chambers ယန္တရား၏ကြားနေစင်တာအခန်းနေရာချနေသည်Williams က et al ။ , 1992) ။ အဆိုပါစမ်းသပ်ဆဲတိရိစ္ဆာန်အခန်းတစ်လျှောက်လုံးရွှေ့ဖို့အခမဲ့ဖြစ်ပြီးတစ်ဦးချင်းစီအထီးနီးစပ်နီးကပ်အတွက်သုံးစွဲအချိန်ကိုတစ်ဦးအလိုအလျောက်ရောင်ခြည်ချိုးစနစ် (ကို အသုံးပြု. မှတျတမျးတငျထားCurtis နှင့်ဝမ်, 2005b, a; Lim က et al ။ , 2007).
တစ်ဦးကတစ်ရက်အကြာတွင်အမျိုးသမီးတွဲပြီးတစ်ဦးအပိုဆောင်း 12 နာရီအတူတူလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ re-တွဲခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါအမျိုးသမီးထို့နောက်မိတ်ဖက် preference ကို (18 နာရီစုစုပေါင်းအဆက်အသွယ်အချိန်) ထပ်စမ်းသပ်ပြီးခဲ့ကြသည်။ အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနေတဲ့မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းရန်လိုအပ်တံခါးခုံကိုအချိန်ရှိစဉ်ကတည်းကဒါဟာနှစ်ခုဇာတ်စင်ပါရာဒိုင်း, မိတ်ဖက် preference ကိုစမ်းသပ်မှုတစ်ခုပံ့ပိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့ထောက်လှမ်းတိုးမြှင့်ဖို့အသုံးပြုခဲ့သည်။ တိရစ္ဆာန်များသူတို့ကသူစိမ်းတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်သည့်မိတ်ဖက်နှင့်အတူအနီးအနားကနှစ်ကြိမ်အဖြစ်အချိန်အများကြီးသုံးစွဲခဲ့လျှင်မိတ်ဖက် preference ကိုရှိသည်ဖို့စဉ်းစားခဲ့ကြသည်။
မိတ်ဖက်ဦးစားပေးမှုစမ်းသပ်ခြင်း (Meadow ဟာ vole)
ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုလိုနီများထံမှ voles အိမ်ထောင်ဖက်၏ထိတွေ့ခြင်း 24hrs ပြီးနောက်တစ်စုံနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းရန်မည်မဟုတ် Meadows ။ သို့ဖြစ်. စမ်းသပ်မှုများအတွက်, မိတ်ဖက် preference ကိုစမ်းသပ်မှု 24 နှင့်တစ်ဦးအပိုဆောင်း 48 နာရီ (72 နာရီစုစုပေါင်း) ၏တွဲပြီးပြီးနောက်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။ အားလုံးသည်အခြားကုသမှုများနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းနည်းလမ်းများအထက်တွင်ကဲ့သို့တူညီသောဖြစ်ကြသည်။
အဆိုပါအမူအကျင့်စမ်းသပ်ချက်အောက်ပါတိရိစ္ဆာန်များ isofluorane နှင့်အတူနက်ရှိုင်းသောထုံဆေးအောက်ပါခေါင်းဖြတ်အသတ်ခံခဲ့ရသည်။ ဦးနှောက်ပြီးတော့အမှုန့်အခြောက်အရေခဲပေါ်စုဆောင်းအေးခဲခဲ့ကြသည်။ ဦးနှောက် Fisher က Frost က-ပေါင်းဆလိုက်ပေါ်သို့တစ် cryostat ပေါ်6μmမှာ 20 စီးရီးအတွက် NACC မှတဆင့် sectioned ခဲ့ကြသည်။ autoradiography များတွင်အသုံးပြုသည်အထိဆလိုက် -80C မှာသိမ်းဆည်းထားခဲ့ကြသည်။
OTR ကို Autoradiography
OTR ကိုအဲဒီ receptor autoradiography OTR ကို AAV ထိုးသွင်းတိရိစ္ဆာန်များအတွက် binding အကဲဖြတ်ရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။ အနည်းငယ်ပြုပြင်မွမ်းမံနှင့်အတူယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့ Autoradiography (ဖျော်ဖြေခဲ့သည်Insel et al ။ , 1991; ဝမ်နှင့်လူငယ်တို့, 1997) ။ ကဏ္ဍများ, -80C သိုလှောင်မှုမှဖယ်ရှားပစ်လေကြောင်းရန်ခွင့်ပြု, ဖော့စဖိတ်-buffered ဆား (pH ကို 0.1) တွင် 7.4% paraformaldehyde ၌နှစ်ပြီးသောနှင့် endogenous OT ဖယ်ရှားပစ်ရန် 50 MM Tris ကြားခံ (pH ကို 7.4) တွင်နှစ်ကြိမ်နှင့်ဆေးခဲ့သည်။ တစ်သျှူး 50 pm နွေးထွေးစွာရှိနေပြီးခဲ့သည် Next ကို 125ငါ-OVTA (NEX 254050UC PerkinElmer, Waltham, MA) တစ်နာရီအဘို့။ န့်အသတ် radioligand 50mM Tris ပေါင်း 2% MgCl လေးဆေးကြောဖယ်ရှားခဲ့သည်2 (သော pH 7.4) နှင့်ထို့နောက် DH သို့နှစ်ပြီးသော20 နှင့်လေကြောင်းအေးမြသောလေထု၏တစ်ဦးစီးအောက်တွင်အခြောက်လှန်း။ ခြောက်သွေ့တဲ့တပြိုင်နက်, ဆလိုက် 72 နာရီ BioMax MR ရုပ်ရှင် (Kodak, Rochester, NY) ထိတွေ့ခဲ့သည်။ နှစျခု CMV-OTR ကိုတ CMV-GFP တိရိစ္ဆာန်များကြောင့်ဆေးထိုး Miss ဖို့အမူအကျင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှဖယ်ထုတ်လိုက်ခဲ့ကြသည်။
CMV-GFP နှင့်အတူထိုးတစ်ဦးကတိရစ္ဆာန်၏အစိတ်အပိုင်းအစု (N ကို = 5), 50% acrolein (Polysciences, Warrington, PA) ပါဝင်တဲ့ 50 M ကဖော့စဖိတ်ကြားခံအတွက် 4% paraformaldehyde ၏ 0.1 ml အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်, PBS ၏ 2.5 ml နှင့်အတူ transcardially perfused ခဲ့သည်။ sectioning သည်အထိ 4% sucrose ဖြေရှင်းချက်အတွက်ကိုချက်ချင်း perfusion ပြီးနောက်ဦးနှောက်ကိုဖယ်ရှားခဲ့ကြသည်နှင့်အ 30 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာသိမ်းဆည်းထား။ ဦးနှောက် immunohistochemical အပြောင်းအလဲနဲ့သည်အထိ -25 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာ cryoprotectant ဖြေရှင်းချက်ထဲမှာခဲ microtome နှင့်အတူ20μm Coronal ကဏ္ဍများသို့ဖြတ်နှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်-floating သိမ်းဆည်းထားခဲ့ကြသည်။
တစ်ဦးက 1: တစ်ဦးချင်းစီကဦးနှောက်၏ rostrocaudal ဝင်ရိုးမှတဆင့်6စီးရီး GFP များအတွက်လုပ်ငန်းများ၌ခဲ့သည်။ အတိုချုပ်, အပိုင်း, အ cryoprotectant ဖြေရှင်းချက်မှဖယ်ရှားခံခဲ့ရသည်ပိုတက်စီယမ်ဖော့စဖိတ်-buffered ဆား (pH ကို 7.4) တွင်ကျယ်ကျယ်နှင့်ဆေး, ပြီးတော့ပိုလျှံ aldehydes ဖယ်ရှားပစ်ရန် 15% ဆိုဒီယမ် borohydride အတွက် 1 မိနစ်တုံ့ပြန်။ ကဏ္ဍများထို့နောက် 0.1 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာ 1 နာရီအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်အခန်းအပူချိန်မှာ 48 နာရီများအတွက် 4% ထရီ-X ကိုပါဝင်တဲ့ပိုတက်စီယမ်ဖော့စဖိတ်-buffered ဆား (KPBS) တွင် GFP ဆန့်ကျင်ညွှန်ကြားထားမူလတန်း antibody ကိုဖြေရှင်းချက်နွေးထွေးစွာရှိနေပြီးခဲ့ကြသည်။ GFP ်ဆဲလ် 6455 တစ်အာရုံစူးစိုက်မှုမှာ polyclonal ယုန် Anti-GFP antibody ကို (။ ကြောင်အမှတ် A1, Invitrogen, Carlsbad,, CA) ကို အသုံးပြု. ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်: 100,000 ။ 1 နှင့် KPBS နှင့်ဆေးတစ် 1- အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်: မူလတန်း antibody ကိုပေါက်ဖွားပြီးနောက်, တစ်ရှူး 600 တစ်အာရုံစူးစိုက်မှုမှာ biotinylated ဆိတ်သငယ်ကိုဆန့်ကျင်ယုန် IgG (Jackson က Immunoresearch အနောက် Grove, PA) တွင် 1 နာရီများအတွက်နွေးထွေးစွာရှိနေပြီး, KPBS နှင့်ဆေးခဲ့သည် 6100: 1 တစ်အာရုံစူးစိုက်မှုမှာ avidin-ဓါတ် peroxidase ရှုပ်ထွေးသော (Credit: ABC Elite Kit PK-200 Vector, Burlingame,, CA) တွင်တစ်နာရီပေါက်ဖွား။ KPBS နှင့် Tris ကြားခံ (pH ကို 7.2) တွင်လက်မဆေးပြီးနောက် GFP Tris ကြားခံအတွက် 3,3% ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်င် 0.08'-diaminobenzidine အသုံးပြု. တစ်ဦးညိုတုံ့ပြန်မှုထုတ်ကုန်အဖြစ်လည်းရှုမြင်နေကြသည်။ အဆိုပါတုံ့ပြန်မှုထုတ်ကုန် Tris ကြားခံအတွက်လက်မဆေးခြင်းဖြင့်ပြီးနောက်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 20 မိနစ်ရပ်စဲခံခဲ့ရသည်။ ကဏ္ဍများ Histoclear အတွက်ရှင်းလင်းအဆင့်အလိုက်သတ်မှတ်ထားသောအယ်လ်ကိုဟော၏စီးရီးအတွက်ရေခန်းခြောက် gelatin-subbed ဆလိုက်, Air-အခြောက်လှန်း, (အမျိုးသားရှာဖွေရေး, အတ္တလန်တာ, ဂျော်ဂျီယာ) ပေါ်သို့ဆားထဲကတပ်ဆင်ထားနှင့် Krystalon (EMD ဓာတုပစ္စည်း, Gibbstown, NJ) ကို အသုံးပြု. coverslipped ခဲ့ကြသည်။
ဒေတာကိုယုတ်±စံယုတ် (SEM) ၏ယုတ်±အဖြစ်တင်ပြနေကြသည်။ RM ANOVA ကိုလှုံ့ဆော်မှုပေးသောတိရိစ္ဆာန်တစ်ခုစီကိုမှီခိုသည့်အတိုင်းအတာဖြင့်သုံးစွဲသောအချိန်ကိုအသုံးပြုသည်။ အတွင်း - ဘာသာရပ်များသည်တွဲဖက်သို့မဟုတ်သူစိမ်းဖြစ်ခြင်းနှင့်ကုသမှုအုပ်စုသည်ဘာသာရပ်အကြားဆက်စပ်မှုဖြစ်သည်။ သိသာသောအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတွေ့ရှိသောအခါ Holm-Sidak စမ်းသပ်မှုကို post-hoc pairwise နှိုင်းယှဉ်မှုများအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။ မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles များအတွက် alloparental နှင့်မိတ်လိုက်အပြုအမူအပေါ် ANOVA run ခဲ့ကြသည်တလမ်းတည်းဖြင့်။ ပုံမှန်များအတွက်စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့်မကိုက်ညီသောထိုအပြုအမူများကိုရာထူးပေါ်ရှိကွာခြားချက်ကိုခရူကလက် - ဝေါလိစ်တစ်လမ်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဖြင့်ဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ Alloparental အပြုအမူကိုဖော်ပြသောတိရိစ္ဆာန်များ၏အချိုးအစားတွင်အုပ်စုလိုက်ကွဲပြားမှုများကိုဆုံးဖြတ်ရန် Fisher's Exact Test ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ပုံမှန်စမ်းသပ်မှုပျက်ကွက်သောအခါ Meadow Vole မိတ်လိုက်အပြုအမူကို t-Test နှင့် Mann-Whitney ရာထူးအဆင့်စစ်ဆေးမှုကိုသုံးပြီးဆန်းစစ်ခဲ့သည်။
Prairie Voles အတွက် Alloparental အပြုအမူ
Alloparental အပြုအမူကိုပြသသည့် CMV-OTR ထိုးသွင်းထားသောအမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသရှိ voles အချိုးသည်ထိန်းချုပ်မှု (၄/၁၅) နှင့်အတုအယောင် (၃/၁၀) (p> 3) နှင့်ကွာခြားမှုမရှိပါ။ ပုံ 1A) ။ နှစျခု CMV-OTR ကိုလေး CMV-GFP ထိန်းချုပ်မှုနှင့် Non-alloparental အဖြစ်ခွဲခြားခဲ့ပြီးသောနှစ်ခုအတုအယောင်အမျိုးသမီးသည်, ခွေးများတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ခွေးများချဉ်းကပ်ဖို့အောင်းနေချိန် (ပုံ 1B) နှင့်အချိန်လျက်လျက်လျက် / ဖြီးလိမ်းပုံကိုလည်းအုပ်စုများ (အောင်းနေချိန်များအတွက် H ကို = 0.31, P ကို> 0.8, ဖြီးလိမ်းပုံများအတွက် H ကို = 0.40, P ကို> 0.8) အကြားသိသိသာသာကွာခြားခဲ့ပါဘူး။ Alloparental ဖြစ်ခြင်း၏သတ်မှတ်ချက်ကိုပြည့်မီသောတိရိစ္ဆာန်များကိုသာနှိုင်းယှဉ်သောအခါ CMV-OTR အမျိုးသမီးများ (ချားလ်စ် ၁၄၀.၂ မှ ၆၅.၂ စက္ကန့်) အတွင်းခွေးများထံချဉ်းကပ်ရန်အောင်းနေချိန်သည် CMV-GFP (၆၂.၅ - ၃၉.၃ စက္ကန့်) နှင့်အတု (၁၆၉.၄ - ၅၁.၇ စက္ကန့်) နှင့်မတူပါ။ ) အမျိုးသမီး (F (140.2) = 65.2, p> 62.5) ။ အဆိုပါ alloparental CMV-OTR အမျိုးသမီးများသည် alloparental CMV-GFP နှင့်အတုအယောင်အမျိုးသမီးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ခွေးများကိုလျက်နေသည့်အချိန်ပမာဏမှာကွဲပြားမှုလည်းမရှိပါ (F (39.3) = 169.4, p> 51.7; ပုံ 1C) ။ ခွေးများကိုသုတ်ခြင်း၊ သုတ်သင်ခြင်း၊ သယ်ဆောင်ခြင်းစသည်တို့ပြုလုပ်သောအုပ်စုတစ်ခုစီ၏အချိန်အားလုံးသည် alloparental CMV-OTR (၆၉၅.၂ ± ၇၇.၁ စက္ကန့်) CMV-GFP (၃၈၇.၅ ± ၁၃၂.၇ စက္ကန့်) သို့မဟုတ်အတုအယောင် (၅၀၃.၈ မှ ၈၂.၈ စက္ကန့်) အကြားတွင်မတူပါ။ ) တိရိစ္ဆာန်များ (F (695.2) = 77.1, p> 387.5) ။
အတုအယောင်အတွက် Alloparental အပြုအမူ, CMV-GFP နှင့် CMV-OTR ကိုအမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles ။ A) ကို alloparental အပြုအမူပြသကြောင်းချင်းစီကိုကုသအုပ်စုတွင်အမျိုးသမီး၏အချိုးအစားပေါ်ကုသမှုကိုအဘယ်သူမျှမသက်ရောက်ရှိခဲ့သည်။ အမှောင်ထဲမှာအရက်ဆိုင်ကြောင့်တိရိစ္ဆာန်များ၏ရာခိုင်နှုန်းကိုကိုယ်စားပြုသည် ...
Prairie Voles အတွက်မိတ်လိုက်အပြုအမူ
အမျိုးသမီးများ၏ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူခြင်းကြောင့်မိတ်လိုက်ခြင်းအပြုအမူသည်သိသိသာသာထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပါ။ CMV-GFP နှင့်အတုအယောင်အမျိုးသမီးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက CMV-OTR အမျိုးသမီးများနှင့်တွဲဖက်အထီးရှိအမျိုးသားများနှင့်ပထမအကြိမ် intromission အတွက်အငြင်းပွားမှုသည်သိသိသာသာကွဲပြားမှုမရှိပါ (H = 5.043, p = .08; ပုံ 2A) ။ CMV-OTR အုပ်စုသည်အခြားအုပ်စုများထက်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာမိတ်လိုက်တတ်သော်လည်း၎င်းတို့သည်မကြာခဏမိတ်လိုက်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ပထမနာရီတွင်မိတ်လိုက်ခြင်းအကြိမ်အရေအတွက်သည် CMV-GFP သို့မဟုတ်အတုအယောင်အမျိုးသမီးများပါသည့်စုံမှ CMV-OTR အမျိုးသမီးများပါ ၀ င်သည့်အတွဲများနှင့်ကွာခြားခြင်းမရှိပါ (F (2,31) = 0.46, p> 0.6; ပုံ 2B).
မိတ်လိုက်နှင့်မိတ်ဖက် preference ကိုအပြုအမူအတုအယောင်အတွက် CMV-GFP နှင့် CMV-OTR ကိုအမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles ။ ပထမဦးဆုံးအ intromission (က) မှအဆိုပါအောင်းနေချိန်နှင့်မိတ်လိုက်အကြိမ်ကြိမ်၏နံပါတ် (ခ) အုပ်စုများအကြားသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားကြဘူး။ တစ်ဦး6နာရီတွဲပြီးကာလပြီးနောက်ကို C), ...
Prairie Voles အတွက်မိတ်ဖက်ဦးစားပေးမှုအပြုအမူ
အဆိုပါ6နာရီတွဲပြီးကာလပြီးနောက်, အုပ်စုများအဘယ်သူအားမျှ (ကသိသိသာသာမိတ်ဖက် preference ကိုပြသပုံ 2C) ။ ကုသမှု၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှု (F (2,31) = 0.56, p> 0.5) သို့မဟုတ်သူစိမ်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် (F (1,31) = 0.46, p> 0.5) ၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိပါ။ နောက်ထပ် ၁၂ နာရီမျှအတူတကွနေထိုင်ပြီးနောက်ဆေးကုသမှု၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှု (F (12) = .2,29, p = 78) သို့မဟုတ်သူမနှင့်သူမနှင့်အတူတွဲဖက်သူနှင့်အတူနေခဲ့သောအချိန်ပမာဏ (F (0.5) = 1,29) မရှိပါ။ , p = 3.71) ။ သို့သော်သိသာထင်ရှားသောအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှု (F (0.06) = 2,29, p = 5.56) ရှိခဲ့သည်။ Post-hoc စမ်းသပ်မှုအရ CMV-OTR အမျိုးသမီးများသည်သူစိမ်းနှင့်လက်တွဲဖော်နှင့်အနီးကပ်နီးကပ်စွာအချိန်များစွာပိုမိုရရှိကြောင်း (p <0.009; ပုံ 2D) ။ သို့သော် CMV-GFP နှင့်အတုအယောင်အမျိုးသမီးများသည်ဤအချိန်ကာလပြီးနောက်မိတ်ဖက် ဦး စားပေးမှုကိုပြသရန်ပျက်ကွက်ခဲ့သည် (p> 0.05; ပုံ 2D) ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, CMV-OTR ကို၏ 80% voles CMV-GFP သာ 31% နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက, လူစိမ်းထက်မိတ်ဖက်နှင့်အတူနှစ်ကြိမ်အဖြစ်အချိန်အများကြီးဖြုန်းဆိုလိုသည်မှာတစ်ဦးမိတ်ဖက် preference ကိုရှိခြင်း၏စံရောက်ရှိထိုးသွင်း (အတုအယောင်တိရစ္ဆာန်များ၏% ထိုးသွင်းခြင်းနှင့် 44ပုံ 2E, F ကို).
Prairie Voles ၏ NACC အတွက်နဲ့ OTR နဲ့ GFP Expression
Autoradiography AAV ဆေးထိုး၏နေရာချထားဆုံးဖြတ်ရန်နှင့် CMV-OTR ကို vector ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ binding တိုးမြှင့်နဲ့ OTR မှုကြောင့်အတည်ပြုရန်ပြုလေ၏။ ယခင်ကအစီရင်ခံအဖြစ်, ထိန်းချုပ်မှု CMV-GFP မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles ၏ NACC (ထဲမှာ binding OTR ကိုသိသိသာသာတစ်ဦးချင်းစီအပြောင်းအလဲရှိခဲ့သည်ပုံ 3A, B,) ။ CMV-OTR ကို၏ NACC တွေ့ရှိခဲ့ကြသည် OTR ကိုစည်းနှောင်အတွက်ကွဲပြားမြင့်တက် (မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles ထိုးသွင်းပုံ 3C) ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, GFP immunohistochemistry အဆိုပါ NACC ၏အာရုံခံအတွက်စကားရပ်၏အတိုင်းအတာကိုဆုံးဖြတ်ရန် CMV-GFP တိရစ္ဆာန်များ၏ဦးနှောက်ကဏ္ဍများအပေါ်ဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ အာရုံခံဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်အတူဆဲလ် Clear ကိုတံဆိပ်ကပ်ခြင်းဟာ CMV AAV virus သယ်ဆောင်အာရုံခံ (ထဲမှာစကားရပ်ကားမောင်းကြောင်းအတည်ပြု, ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်ပုံ 3E, F ကို).
CMV-OTR ကိုနှင့် CMV-GFP အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်နဲ့ OTR နဲ့ GFP ထုတ်ဖော် analysis ။ OTR ကိုသိပ်သည်းဆအဲဒီ receptor autoradiography သုံးပြီးဆုံးဖြတ်ထားခဲ့ပါတယ်။ A, B) CMV-GFP အမျိုးသမီး၏ NACC အတွက် binding နဲ့ OTR ၏သိပ်သည်းဆအတွက်သိသာထင်ရှားသောအပြောင်းအလဲရှိခဲ့သည်။ ဤသည်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပါသည် ...
Meadow ဟာ Voles အတွက်မိတ်လိုက်အပြုအမူ
မြက်ခင်းပြင်များတွင်ကုသမှုအုပ်စုများအကြားမိတ်လိုက်ခြင်းအပြုအမူတွင်သိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှုမရှိပါ။ ပထမ ဦး ဆုံး intromission ဖို့အောင်းနေချိန် CMV-GFP (1245.1 ± 1465.9 စက္ကန့်) အမျိုးသမီး (T = 566.6, p> 989.8) ကိုထိန်းချုပ်ရန် mated အထီးနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် CMV-OTR (128.0 ± 0.2 စက္ကန့်) အမျိုးသမီးနှင့်အတူယောက်ျားအထီးကွဲပြားခြားနားမဟုတ်ခဲ့ပေ။ ပထမတစ်နာရီတွင်မိတ်လိုက်သည့်အကြိမ်အရေအတွက်သည် CMV-GFP (၉.၅ - ၄.၄) အမျိုးသမီးများပါ ၀ င်သည့်စုံလင်သော CMV-OTR (၆.၈ - ၅.၁) အမျိုးသမီးများ (t = 6.8, p> 5.1) နှင့်ကွဲပြားသည်မဟုတ်။
Meadow ဟာ Voles အတွက်မိတ်ဖက်ဦးစားပေးမှု
တစ်ဦး 24hr တွဲပြီးကာလပြီးနောက်, အုပ်စုများအဘယ်သူအားမျှ (ကသိသိသာသာမိတ်ဖက် preference ကိုပြသပုံ 4A) ။ ကုသမှု၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှု (F (1,20) = 0.19, p> 0.6) သို့မဟုတ်သူစိမ်းနှင့်တွဲဖက်လုပ်ကိုင်သောအချိန် (F (1,20) = 0.09, p> 0.7) ရှိခဲ့သည်။ နောက်ထပ် ၄၈ နာရီမျှအတူတကွနေထိုင်ပြီးနောက်ဆေးကုသမှု၏ထူးခြားသောအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှု (F (48) = ။ 1,19, p> 65) သို့မဟုတ်အမြိုးသမီးတစျ ဦး နှငျ့အတူတကွသုံးသပျမှုမရှိပါ (F (0.4) = 1,19, p> .0.62; ပုံ 4B).
တစ်ဦး 24 နာရီ Co-နေရာအရပ်သည် (က) အပြီးနှင့်တစ်ဦး culmulative 72 နာရီ Co-နေရာအရပ်သည် (ခ) အပြီးအမျိုးသမီးမြက်ခင်း voles ၏မိတ်ဖက် preference ကိုအပြုအမူ။ CMV-OTR ကိုနှင့် CMV-GFP အမျိုးသမီးတစ်ဦးအဖော် preference ကိုမပြခဲ့ပါဘူးထိုးသွင်း။ သူတို့ဖက်နှင့်အတူအချိန်ညီမျှပမာဏသုံးစွဲ ...
Meadow ဟာ Voles ၏ NACC အတွက် OTR ကိုဖော်ပြမှု
CMV-GFP (မြက်ခင်း voles အဆိုပါ NACC အတွက် binding အနည်းငယ်သာသို့မဟုတ်လုံးဝမနဲ့ OTR ခဲ့ထိုးသွင်းပုံ5A) ။ ဆနျ့ကငျြ, CMV-OTR ကို (ထိုမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles ၏နှိုင်းယှဉ်, မြက်ခင်း voles အဆိုပါ NACC အတွက် binding သိသိသာသာနဲ့ OTR ခဲ့ထိုးသွင်းပုံ 5B).
CMV-OTR ကို (က) နှင့် CMV-GFP (ခ) ၏ NACC အတွက် OTR ကို binding သိပ်သည်းဆသရုပ်ဖော် receptor autoradiography voles Meadows ။ ကြောင်း CMV-GFP အမျိုးသမီးမြက်ခင်း voles အဆိုပါ NACC အတွက် binding အနည်းငယ်သာသို့မဟုတ်လုံးဝမနဲ့ OTR ခဲ့သတိပြုပါ။ သို့သော် NACC အတွက် binding OTR ကိုသိသိသာသာမွငျ့မားခဲ့ ...
အဆိုပါ NACC အတွက် OTR ကိုသိပ်သည်းဆအတွက်မျိုးစိတ်ကွဲပြားမှု (OTR ကိုအဲဒီ receptor စကားရပ်ထဲမှာအပြောင်းအလဲလူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းနှင့်အပြုအမူအတွက်မျိုးစိတ်ကွဲပြားမှုအခြေခံဖြစ်နိုင်သည်အကြံပြုခြင်း, မိတ်လိုက်မဟာဗျူဟာ (မယားအမြားယူ vs လူမှုရေးစျမယား) နှင့် alloparental အပြုအမူအတွက်မျိုးစိတ်ကွဲပြားမှုနဲ့ဆက်စပ်ပြီInsel et al ။ , 1991; ငယ်ရွယ်ပြီးဝမ်, 2004; Olazabal နှင့်လူငယ်တို့, 2006b) ။ လူမှုရေးအရ monogamous မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles Non-monogamous မြက်ခင်းများနှင့် montane voles ထက် NACC အတွက် OTR ကိုမြင့်မားထုရှိသည်, ထို receptors ၏ pharmacological ပိတ်ဆို့ထားခြင်း (မိတ်လိုက်-သွေးဆောင်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းကိုကာကွယ်တားဆီးလူငယ်တို့ et al ။ , 2001; Olazabal နှင့်လူငယ်တို့, 2006b) ။ မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွင်း NACC အတွက် OTR ကိုသိပ်သည်းဆအတွက်သိသာထင်ရှားသောတစ်ဦးချင်းစီအပြောင်းအလဲ (လည်းရှိပါသည်ပုံ 3A, B,) ။ ဤဒေသတွင် OTR ကိုသိပ်သည်းဆအပြုသဘောအရွယ်ရောက်ပြီးသူ၏ alloparental အပြုအမူအတွက်တစ်ဦးချင်းစီအပြောင်းအလဲလိင်ရင်တော့မှားမယ်အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles (ဆက်နွယ်နေကြောင်းဖြစ်ပါတယ်လူငယ်တို့, 1999; အဆိုပါ NACC သို့ Olazabal 2006) နဲ့ OTR ရန်အုပ်ချုပ်ရေး (ဒီအပြုအမူဖယ်ရှားOlazabal နှင့်လူငယ်တို့, 2006a) ။ ထို့ကြောင့်ဤလေ့လာမှု၌ AAV ဗီဇလွှဲပြောင်း အသုံးပြု. တိုက်ရိုက် voles အတွက်အဲဒီ receptor အဆိုပါ NACC အတွက်သိပ်သည်းဆနှင့် Affiliate အပြုအမူအကြားဆက်ဆံရေးကိုစမ်းသပ်ဖို့ရှာကြံလျက်နေ၏။
ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကိုဟောကိန်းထုတ်သကဲ့သို့, NACC display ကိုအတွက်နဲ့ OTR ၏မြင့်မားသောအဆင့်အတန်းနှင့်အတူအမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အောက်ပိုင်းနဲ့ OTR သိပ်သည်းဆ (CMV-GFP သို့မဟုတ်ရှမ်းစ်) နဲ့အမျိုးသမီးနှိုင်းယှဉ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းအရှိန်, ဖော်ပြသည်။ Cကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန့်မှန်းဖို့ ontrary, အုပ်စုများအကြား alloparental အပြုအမူမကွာခြားချက် OTR ကိုမိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် alloparental အပြုအမူထိန်းညှိ accumbal သော differential ကိုယန္တရားများအကြံပြုခြင်းရှိ၏။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကို OTR ကိုစကားရပ်များတွင်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှု Affiliate အပြုအမူအချို့ရှုထောင့်မှာရှိတဲ့အချင်းချင်းအပြန်အလှန်မျိုးစိတ်အပြောင်းအလဲအထောက်အကူပြုသောအယူအဆထောက်ခံပါတယ်။ သို့သော် NACC အတွက်နဲ့ OTR စကားရပ်တိုးပွားလာ accumbal OTR ကိုတစ်ဦးတည်းအတွက်မျိုးစိတ်ကွဲပြားမှုမိတ်ဖက်ဖွဲ့စည်းရန်နိုင်စွမ်းအတွက်မျိုးစိတ်ကွဲပြားမှုရှင်းပြဖို့လုံလောက်သောမစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုအကြံပြုပင်တွဲပြီး၏ 72 နာရီပြီးနောက်မြက်ခင်း voles အတွက်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းသွေးဆောင်ဖို့လုံလောက်သောမဟုတ်ခဲ့ ဦးစားပေး။ ဒါဟာဆန်းစစ် parameters များကိုမဆိုအတွက်မိတ်လိုက်အပြုအမူမအုပျစုကွဲပြားမှုရှိကြ၏သတိပြုပါရန်အရေးကြီးပါသည်။ ထို့ကြောင့်စမ်းသပ်မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်တိုးမြှင့်မိတ်ဖက် preference ကိုကနဦးတွဲပြီးကာလအတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုတိုးလာမှစွပ်စွဲမရနိုင်ပါ။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles alloparental စောင့်ရှောက်မှု၏သူတို့ရဲ့ display ကိုအတွက်ထူးခြားတဲ့တစ်ဦးချင်းစီအပြောင်းအလဲပြသပါ။ လိင်ရင်တော့မှားမယ်အမျိုးသမီး၏အကြောင်း 50% ကောက်ကာငင်ကာ (လှကျြ / သတို့သား retrieve, သူတို့မှပေးအပ်ခွေးများကျော်ပျံဝဲပါလိမ့်မယ်Lonstein နှင့် De Vries, 1999; Bale နှင့် Carter က, 2003; Olazabal နှင့်လူငယ်တို့, 2005) ။ မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles တို့တွင် NACC အတွက် OTR ကိုသိပ်သည်းဆအတွက်သိသာထင်ရှားသောတစ်ဦးချင်းစီအပြောင်းအလဲ (လည်းရှိပါသည်လူငယ်တို့, 1999) ။ အဆိုပါ NACC အတွက် OTR ကိုမြင့်မားသိပ်သည်းဆမိန်းမတွေကဒီဧရိယာထဲမှာ OTR ကိုအနိမ့်နှင့်အတူတိရိစ္ဆာန်များထက် alloparental တုန့်ပြန်ဖော်ပြရန်ဖို့ပိုများပါတယ်။ ထိုသို့မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles ၏ NACC အတွက် OTR ကိုသိပ်သည်းဆမြှ alloparental အပြုအမူမြှင့်တင်ရန်မအံ့သြစရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒီတိရစ္ဆာန်ပြပွဲလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုမိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းအရှိန်အဆိုပါဗိုင်းရပ်စ်အားနည်းချက်ကို Transgene ကနေဆင်းသက်လာတာနဲ့ OTR function ဟာ NACC အတွက် transduction လမ်းကြောင်းအချက်ပြမှ coupled ခဲ့အကြံပြုအပ်ပါသည်။
ကျနော်တို့ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း NACC အတွက် OTR ကို activation အတွက်တစ်ဦးချင်းစီအပြောင်းအလဲ alloparental အပြုအမူအတွက်အချင်းချင်းအပြန်အလှန်မျိုးစိတ်အပြောင်းအလဲထုတ်လုပ်အတွက်တစ်ဦးထက်ပိုအရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍစေခြင်းငှါ hypothesize ။ အဆိုပါ NACC အတွက် OTR ကိုသိပ်သည်းဆနှင့် alloparental အပြုအမူအတွက်အပြုသဘောဆက်စပ်မှုလူငယ်မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အဖြစ်လူကြီးများ (များတွင်ပြသထားသည်Olazabal နှင့်လူငယ်တို့, 2006b, a) ။ မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက် Alloparental အပြုအမူဖှံ့ဖွိုးတိုးတကာလအတွင်းထင်သည်တုန်လှုပ်မှုတည်းဖို့အထူးသဖြင့်အထိခိုက်မခံဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ညီလေးမှ perinatal ထိတွေ့မှု (အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက် alloparental အပြုအမူပွောငျးလဲBale et al ။ , 2007) ။ ထို့ကြောင့်, ဖွံ့ဖြိုးရေးစဉ်အတွင်း OTR ကိုမြင့်မားသိပ်သည်းဆတစ်ဦးချင်းစီကိုသူတို့လူကြီးများဖြစ်လာအဖြစ် alloparental အပြုအမူပြသ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးမြှင့်ကြောင်းကြာရှည် neurochemical အပြောင်းအလဲများအတွက်ရရှိလာတဲ့သည် NACC အတွက်အချက်ပြ OTR ကိုတိုးမြှင့်ကိုခံစားရပေမည်။ ဒီယူဆချက်မှန်လျှင်, ငါတို့သည်မွေးကင်းစကလေးပု NACC အတွက်နဲ့ OTR စကားရပ်တိုးပွားလာ alloparental အပြုအမူ၏ကြိမ်နှုန်းကိုတိုးမြှင့်မယ်လို့ခန့်မှန်းလိမ့်မယ်။
alloparental အပြုအမူကိုတိုးမြှင့်ဖို့ NACC အတွက်နဲ့ OTR စကားရပ်တိုးမြှင့်ရဲ့ပျက်ကွက်မှုအတွက်နောက်ထပ်ရှင်းပြချက်မျိုးစုံဦးနှောက်ဒေသများတွင် OTR ကိုစကားရပ်ထဲမှာအပြောင်းအလဲအပြုအမူအတွက်မျှော်မှန်းမတူကွဲပြားမှုထုတ်လုပ်ရန်လိုအပ်သောဖြစ်နိုင်သည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ, နှစ်ဦးနှစ်ဖက် septum အတွက်နဲ့ OTR စကားရပ်အနုတ်လက္ခဏာ (alloparental အပြုအမူဆက်နွယ်နေကြောင်းဖြစ်ပါတယ်Olazabal နှင့်လူငယ်တို့, 2006a) ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကဟော်မုန်းထိတွေ့မှုသို့မဟုတ်လူမှုရေးအတွေ့အကြုံကိုအတွက်အပြောင်းအလဲ alloparental အပြုအမူပြောင်းလဲအပြင်မှာရှိတဲ့ NACC အတွက် OTR ကိုသိပ်သည်းဆသြဇာလွှမ်းမိုးကြောင်းလည်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, Steroid တစ်မျိုးဟော်မုန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်သို့မဟုတ် perinatal ခြယ်လှယ်နေစဉ်အတွင်းအဘ၏ရှေ့မှောက်တွင်သို့မဟုတ်မရှိခြင်း (အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက် alloparental တုန့်ပြန်၏ display ကိုလွှမ်းမိုးနိုင်သည်ရောဘတ် et al ။ , 1996; ရောဘတ် et al ။ , 1998; Lonstein နှင့် De Vries, 2000).
အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles ခုနှစ်, vasopressin (အမျိုးသမီးအတွက် oxytocin ၏အခန်းကဏ္ဍကို paralleling တစ်အရေးပါအဖေဘက်ကအမူအကျင့်များခင်းကျင်းပြသအတွက်အခန်းကဏ္ဍအဖြစ်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းကစားWinslow et al ။ , 1993; ဝမ် et al ။ , 1994) ။ ဆိုက်ကို-တိကျတဲ့ pharmacological လေ့လာမှုများကို (ventral pallidum အတွက် V1aR, အ NACC ၏အဓိကထွက်ရှိ, pair တစုံနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းရေးများအတွက်အရေးပါဖြစ်ကြောင်းသရုပ်ပြLim ကများနှင့်လူငယ်, 2004) ။ ဗိုင်းရပ်စ်အားနည်းချက်ကိုကမကထပြုခဲ့ဗီဇလွှဲပြောင်းသုံးပြီး ventral pallidum အတွက် V1aR တိုးပွားလာ (အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles ၏မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း acceleratesPitkow et al ။ , 2001), လက်ရှိလေ့လာမှုမှုနဲ့အပြိုင်တဲ့တွေ့ရှိချက်။ Over-ဖော်ပြအထီးမြက်ခင်း voles ၏ ventral pallidum အတွက် V1aR အဖေဘက်ကအမူအကျင့်သွေးဆောင်ဖို့လုံလောက်သောမဟုတ်ခဲ့ပေမယ့်, က (မိတ်ဖက် preference ကိုမြှင့်တင်ရန်လုပ်ခဲ့တယ်Lim က et al ။ , 2004); ဆနျ့ကငျြဘ၌, NACC အတွက်နဲ့ OTR ၏ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှု overexpression အတွက်အမျိုးသမီးမြက်ခင်း voles အတွက်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းကိုလှုံ့ဆော်ခြင်းမရှိပေ။
မိတ်ဖက်ဦးစားပေးဖွဲ့စည်းရန်ဖို့ NACC အတွက်မြင့်မားသော OTR ကိုနှင့်အတူအမျိုးသမီးမြက်ခင်း voles ၏ပျက်ကွက်မှုအတွက်အများအပြားအလားအလာရှင်းလင်းချက်ရှိပါတယ်။ ပထမဦးစွာမိတ်လိုက်နေစဉ် NACC အတွင်း OT လွှတ်ပေးရန်အတွက်မျိုးစိတ်ကွဲပြားမှုအမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles နှင့်မြက်ခင်း voles အကြားကွဲပြားနိုင်သည်။ OTR ကိုမူပြောင်းခြင်းမျိုးစိတ်အကြားမတူပေမယ့်, နှစ်ဦးစလုံးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles နှင့်မြက်ခင်း voles အဆိုပါ NACC (Ross နဲ့လူငယ်, အတည်မပြုရသေးသောဒေတာ) တွင်အချိန်ပို-immunoreactive အမျှင်ရှိသည်။ Vivo အတွက် microdialysis စမ်းသပ်ချက်မိတ်လိုက်အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles ၏ NACC အတွက်ညီလေးလွတ်မြောက်ရေးအတွက်လှုံ့ဆော်ပေမယ့်အပြိုင်လေ့လာမှုများမြက်ခင်း voles (CD ကိုကိုးလ်နှင့်လူငယ်တို့, အတည်မပြုရသေးသောဒေတာ) တွင်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြပြီမဟုတ်ကြောင်းပြသခဲ့ကြသည်။ ဒါဟာ CMV-OTR ကိုကုသတိရစ္ဆာန်များသို့ညီလေး၏ပြုတ်ရည်မြက်ခင်း voles အတွက်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းလွယ်ကူချောမွေ့မယ်လို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့ (ကြွက်သိုးအတွက် vaginocervical ဆွအလယ်ပိုင်းညီလေးလွတ်မြောက်ရေးအတွက်တိုးပွါးကြောင်းမှတ်သားရပါမည်Kendrick et al ။ , 1986; Sansone et al ။ , 2002) ။ ဒါကြောင့်မြက်ခင်း voles ပြီးသားမိတ်လိုက်နှင့်အတူ accumbal OT ထဲမှာမြင့်တက်ကြုံနေရသည်ဟုယူဆရသည်။ အမျိုးသမီးမြက်ခင်း voles အတွက်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းလှုံ့ဆော်ဖို့ NACC နဲ့ OTR စကားရပ်၏ပျက်ကွက်မှုအတွက်နောက်ထပ်ရှင်းပြချက်ကိုအခြားဦးနှောက်ဒေသများတွင် OTR ကိုစကားရပ်အတွက်မျိုးစိတ်ကွဲပြားမှု pair တစုံဘွန်းအတွက်လည်းလိုအပ်သောဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, OTR ကိုသိပ်သည်းဆ (nonmonogamous vole မျိုးစိတ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက် prefrontal cortex နဲ့နှစ်ဦးနှစ်ဖက် amygdala လည်းပိုမိုမြင့်မားဖြစ်ပါသည်Insel et al ။ , 1991; လူငယ်တို့ et al ။ , 1996; Smeltzer et al ။ , 2006) ။ ထို့ကြောင့်, မျိုးစုံက်ဘ်ဆိုက်များအတွက်နဲ့ OTR စကားရပ်မြှမြက်ခင်း voles အတွက်မိတ်လိုက်-သွေးဆောင်ဖက်ဦးစားပေးလှုံ့ဆော်ဖို့အတှကျလိုအပျသညျ့ဖြစ်နိုင်သည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကမျိုးစိတ်အကြားမျိုးစုံ neurochemical ကွဲပြားခြားနားမှုအပြုအမူအတွက်မျိုးစိတ်ကွဲပြားမှု (ဥပမာ dopamine, corticotropin လွှတ်အချက်) (တာဝန်ရှိသည်ဖြစ်ကြောင်းဖြစ်နိုင်Gingrich et al ။ , 2000; လျူနှင့်ဝမ်, 2003; Smeltzer et al ။ , 2006; Lim က et al ။ , 2007).
ဆွေးနွေးမှုခိုင်လုံသောငါတို့စမ်းသပ်ချဉ်းကပ်၏အတော်ကြာအရေးကြီးသောအတွက်အသိပေးချက်ရှိပါတယ်။ ပထမဦးစွာ CMV-OTR ကိုဖွယ်ရှိပုံမှန်အားဖြင့်ညီလေးတုံ့ပြန်မအာရုံခံလူဦးရေအပါအဝင်ထိုးသွင်းဧရိယာထဲမှာအားလုံးဆဲလ်အမျိုးအစားများအတွက်နဲ့ OTR စကားရပ်တိုးတက်လာခဲ့သည်။ သို့သော်ကရ Transgene OTR ကိုပုံမှန်အားဖြင့်ဘာလို့လဲဆိုတော့ညီလေးမှတိုးမြှင့်အကဲဆတ်ခြင်း endogenous OTR ကိုဖော်ပြကြောင်းအာရုံခံအတွက် သာ. ကြီးမြတ်အချက်ပြမှုကြောင့်ဖြစ်နိုင်သူတို့အားအာရုံခံပေါ်သို့ဖြန့်ချိခြင်းသို့မဟုတ်သင့်လျော်သောမြစ်အောက်ပိုင်းအချက်ပြမော်လီကျူး၏ရှေ့မှောက်တွင်။ ဒုတိယအချက်မှာဗိုင်းရပ်စ်အားနည်းချက်ကိုပြုတ်ရည်များကထုတ်လုပ် Transgene စကားရပ်၏ဧရိယာတစ်ပုံစံတည်းအဆိုပါ NACC ၏တစ်ခုလုံးကို rostral-caudal သို့မဟုတ် medio-lateral အတိုင်းအတာကျော်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုမခံခဲ့ရပါဘူး။ အဆိုပါ CMV-OTR ကိုအမျိုးသမီးများတွင် OTR ကိုစကားရပ်တသမတ်တည်းအဆိုပါ NACC ၏ shell ကိုနှင့်ကပ်လျက် core ကိုတိုင်းဒေသကြီးများတွင်ခြီးမွှောကျခဲ့သညျ။ သို့သော်ထိုသို့ NACC ၏ shell ကိုအများဆုံးမိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများတွင်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရခဲ့ပြီးဒီတူညီတဲ့ဒေသတွင်း၌ OTR ကိုသိပ်သည်းဆကိုပိုမိုမြင့်မားအဓိကဒေသထက် alloparental အပြုအမူဆက်နွယ်နေကြောင်းကြောင်းမှတ်သားရပါမည်။
ဤသည်နိဂုံးဦးနှောက်ထဲမှာ OTR ကိုစကားရပ်ထဲမှာအပြောင်းအလဲလူမှုရေးအပြုအမူအတွက်အပြောင်းအလဲအထောက်အကူပြုနိုင်ပါတယ်သရုပ်ပြဖို့ပထမဦးဆုံးလေ့လာမှုဖြစ်ပါတယ်။ OT ကျယ်ပြန့်ခြင်း (လူမှုရေးသတင်းအချက်အလက်အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်မှတ်ဉာဏ်အပါအဝင်အများအပြားအပြုအမူတွေ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း, အိမ်ထောင်ဖက်ရွေးချယ်မှု, မိခင်ပွားနှင့်ပူးတွဲမှုနှင့်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရထားပြီးDantzer et al ။ , 1987; Kendrick, 2000; ဖာဂူဆန် et al ။ , 2001; Kavaliers et al ။ , 2003) ။ ညီလေးအဖြစ်ကိုကောင်းစွာလူ့လူမှုရေးသိမှတ်ခံစားမှု modulates ကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းသက်သေအထောက်အထားလူ့ယုံကြည်မှု, မျက်စိအကြည့်, မျက်နှာမှတ်ဉာဏ်နှင့်စိတ်ခံစားမှုအမြင် (အပါအဝင်ယခုရှိပါသည်Kosfeld et al ။ , 2005; မိုးခုံး et al ။ , 2007; Guastella et al ။ , 2008; Savaskan et al ။ , 2008) ။ OT အုပ်ချုပ်ရေး (autistic ဘာသာရပ်များအတွက်အသံဖြင့်အသံသြဇါ task ထဲမှာလူမှုရေးသိမှတ်ခံစားမှု၏ retention ကိုတိုးပွားစေHolland et al ။ , 2007), နှင့်အတော်ကြာမျိုးရိုးဗီဇလေ့လာမှုများ Non-coding ကတော့ OTR ကိုဗီဇ၏ polymorphic နှင့်အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာ spectrum ကိုရောဂါ (အကြားကျိုးနွံအသင်းအဖွဲ့များကဖော်ပြခဲ့သည်ပါပြီဝူ et al ။ , 2005; ယာကုပ်အမျိုးကို et al ။ , 2007; Lerer et al ။ , 2007; Yrigollen et al ။ , 2008) ။ အဲဒီမှာနဲ့ OTR ၏ဖြန့်ဖြူးအပေါ်ကန့်သတ်သတင်းအချက်အလက်ဖြစ်ပြီး, ဘာမျှလူ့ဦးနှောက်ထဲမှာ OTR ကိုသိပ်သည်းဆအတွက်တစ်ဦးချင်းစီအပြောင်းအလဲနှင့် ပတ်သက်. လူသိများသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကိုသတ်သတ်မှတ်မှတ်ဦးနှောက်ဒေသများတွင် OTR ကိုသိပ်သည်းဆအတွက်အပြောင်းအလဲလူသားတွေအတွက်လူမှုရေးသိမြင် function ကိုအတွက်တစ်ဦးချင်းစီကွဲပြားခြားနားမှုကိုအထောက်အကူပြုစေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။
အဆိုပါစာရေးဆရာကျွန်တော်တို့ရဲ့ vole ကိုလိုနီစီမံခန့်ခွဲသူမ၏အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အလုပ် Lorra Mathews ကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်။ ဒီလေ့လာမှုက NIH ကထောက်ခံခဲ့သည် Yerkes အမျိုးသားမျောက်ဝံများသုတေသနစင်တာကိုမှ LJY, RR064692 မှ MH00165 ပေးအပ်နှင့်တွင် NSF STC အိဗ်-9876754 ။
KL, Carter က CS Bales ။ လိင်ကွဲပြားမှုနှင့်မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်ကျူးကျော်နှင့်လူမှုရေးအပြုအမူအပေါ် oxytocin ၏ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာသက်ရောက်မှု (Microtus ochrogaster) Horm ပြုမူနေ။ 2003; 44: 178-184 ။ [PubMed]
Bale KL, ဗန် Westerhuyzen ဂျာ Lewis က-Reese အေဒီ, Grotte ND, Lanter ဂျာ Carter က CS ။ oxytocin အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်တစ်စုံ-Bond နှင့် alloparental စောင့်ရှောက်မှုအပေါ်ထိုး-မှီခိုဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ Horm ပြုမူနေ။ 2007; 52: 274-279 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Curtis JT, အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်တစ်စုံ Bond အတွက်ဝမ် Z. Ventral tegmental ဧရိယာပါဝင်ပတ်သက်မှု။ Physiol ပြုမူနေ။ 2005a; 86: 338-346 ။ [PubMed]
Curtis JT အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်တစ်စုံ Bond အတွက်ဝမ် Z. Glucocorticoid အဲဒီ receptor ပါဝင်ပတ်သက်မှု: ဗဟို dopamine ဆုလာဘ်စနစ်များနှင့်အတူစူးရှပိတ်ဆို့ထားခြင်းနှင့်အပြန်အလှန်၏ဆိုးကျိုးများ။ neuroscience ။ 2005b; 134: 369-376 ။ [PubMed]
Dantzer R ကို, Bluthe RM, Koob gf, လူမှုရေးမှတ်ဉာဏ်၏က Le Moal အမ် Modulation neurohypophyseal peptides အားဖြင့်အထီးကြွက်များဖြစ်သည်။ Psychopharmacology (Berl) 1987; 91: 363-368 ။ [PubMed]
မိုးခုံး, G, Heinrich M က, မိုက်ကယ်တစ်ဦးက, Berger က C, Herpertz SC ။ oxytocin လူသားမြားသညျမှာ "စိတ်ကို-ဖတ်နေ" ပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2007; 61: 731-733 ။ [PubMed]
ဖာဂူဆန်ဖြစ်မှု, Aldag JM, Insel TR, Young က LJ ။ အဆိုပါ medial amygdala အတွက် oxytocin မောက်အတွက်လူမှုရေးအသိအမှတ်ပြုမှုများအတွက်မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။ J ကို neuroscience ။ 2001; 21: 8278-8285 ။ [PubMed]
Gingrich B, လျူ Y ကို, Cascio ကို C, ဝမ် Z ကို, Insel TR ။ နျူကလီးယပ် accumbens အတွက် Dopamine D2 receptors (အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်လူမှုရေးပူးတွဲမှုများအတွက်အရေးကြီးပါသည်Microtus ochrogaster) ပြုမူနေ neuroscience ။ 2000; 114: 173-183 ။ [PubMed]
Gruderadams S က, Getz ll ။ အဆိုပါအိမ်ထောင်ဖက်စနစ်နှင့်အဖေဘက်ကအမူအကျင့်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် Microtus ochrogaster နှင့် Microtus pennsylvanicus။ Mammalogy ၏ဂျာနယ်။ 1985; 66: 165-167 ။
Guastella AJ, Mitchell က PB, Dadds MR ။ oxytocin လူ့မျက်နှာများ၏မျက်စိဒေသမှကြည့်တိုးပွားစေပါသည်။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2008; 63: 3-5 ။ [PubMed]
Holland, E, Bartz J ကို, Chaplin W က, Phillips ကတစ်ဦး, Sumner J ကို, Soorya L ကို, Anagnostou အီး, Wasserman အက်စ် oxytocin အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာအတွက်လူမှုရေးသိမှတ်ခံစားမှု၏ retention ကိုတိုးပွားစေပါသည်။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2007; 61: 498-503 ။ [PubMed]
Insel TR, Shapiro LE ။ oxytocin အဲဒီ receptor ဖြန့်ဖြူး monogamous နှင့်ဇနီးတစ်ယောက်ထက် ပို. voles အတွက်လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းကထင်ဟပ်။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 1992; 89: 5981-5985 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Insel TR, Gelhard R ကို, Shapiro LE ။ monogamous နှင့်ဇနီးတစ်ယောက်ထက် ပို. ကြွက်တွေမှာ neurohypophyseal peptides အဘို့အ forebrain receptors များ၏နှိုင်းယှဉ်ဖြန့်ဖြူး။ neuroscience ။ 1991; 43: 623-630 ။ [PubMed]
ယာကုပ်အမျိုးကိုက S, Brune CW, Carter က CS, Leventhal BL, သခင်ကို C, ကွတ် Eh ။ , အ oxytocin receptor မျိုးရိုးဗီဇ (OXTR) ၏ Jr အစည်းအရုံးအထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာနှင့်အတူကော့ကေးဆပ်ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များတွင်။ neuroscience လက်တ။ 2007; 417: 6-9 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Kavaliers M က, Colwell DD, Choleris အီး, Agmo တစ်ဦးက, Muglia LJ, Ogawa S က, Pfaff DW ။ အမျိုးသမီး oxytocin နောက်ကောက်ကြွက်အားဖြင့်ကပ်ပါးကောင်အထီးအနံ့မှ၏ခွဲခြားဆက်ဆံမှုများနှင့်ခြင်းကိုမနှစ်သက်ချို့ယွင်း။ မျိုးဗီဇဦးနှောက်ပြုမူနေ။ 2003; 2: 220-230 ။ [PubMed]
Kendrick KM ။ oxytocin, မိခင်နှင့် Bond ။ Exp Physiol ။ 2000; 85 (အထူးအသေးစိတ်အဘယ်သူမျှမ): 111S-124S ။ [PubMed]
Kendrick KM, Keverne eb, Baldwin BA, Sharman DF ။ သိုးအတွက်အလုပ်သမား, parturition, vaginocervical ဆွ, သိုးသငယ်ကိုခွဲခြာနှင့်နို့စို့နေစဉ်အတွင်း acetylcholinesterase, monoamines နှင့် oxytocin ၏ Cerebrospinal အရည်အဆင့်ဆင့်။ Neuroendocrinology ။ 1986; 44: 149-156 ။ [PubMed]
Kosfeld M က, Heinrich M က, Zak PJ, Fischbacher ဦး, Fehr အီး oxytocin လူသားတွေအတွက်ယုံကြည်မှုတိုးပွားစေပါသည်။ သဘာဝ။ 2005; 435: 673-676 ။ [PubMed]
Lerer အီး, လေဝိ S က, ဆော်လမွန်က S, Darvasi တစ်ဦးက, Yirmiya N ကို, Ebstein RP ။ အဆိုပါ oxytocin အဲဒီ receptor အကြားအသင်း (OXTR) ဗီဇနှင့်အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာ: Vineland အလိုက်အပြုအမူအကြေးခွံများနှင့်အခြားသောကောင်းကျိုးမှဆက်ဆံရေးမျိုး။ Mol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2007 [PubMed]
Lim က MM, Young က LJ ။ အဆိုပါ monogamous မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole အတွက်တစ်စုံနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းရေးအခြေခံ Vasopressin-မှီခိုအာရုံကြောဆားကစ်။ neuroscience ။ 2004; 125: 35-45 ။ [PubMed]
Lim က MM, ဝမ် Z ကို, Olazabal DE, Ren က X, Terwilliger EF, Young က LJ ။ တစ်ခုတည်းဗီဇ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးကြိုးကိုင်နေဖြင့်တစ်ဦးကရာမျိုးစိတ်အတွက် Enhanced မိတ်ဖက် preference ကို။ သဘာဝ။ 2004; 429: 754-757 ။ [PubMed]
Lim က MM, လျူ Y ကို, Ryabinin AE, Bai Y ကို, ဝမ် Z ကို, Young က LJ ။ နျူကလီးယပ် accumbens အတွက် CRF receptors မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်မိတ်ဖက် preference ကို modulate ။ Horm ပြုမူနေ။ 2007; 51: 508-515 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Lonstein JS, De Vries GJ ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူကညာမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles ၏မိဘအပြုအမူအတွက်လိင်ကွဲပြားမှု: gonadal ဟော်မုန်းနှင့် vasopressin ထံမှလွတ်လပ်ရေး။ J ကို Neuroendocrinol ။ 1999; 11: 441-449 ။ [PubMed]
Lonstein JS, De Vries GJ ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူကညာမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်မိဘ၏အပြုအမူများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ် gonadal ဟော်မုန်း၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု (Microtus ochrogaster) ပြုမူနေဦးနှောက် Res ။ 2000; 114: 79-87 ။ [PubMed]
Olazabal DE, Young က LJ ။ "အလိုအလျောက်" မိခင်အပြုအမူအတွက် variable နုံလူငယ်နှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles (ထဲမှာစိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းကဲ့သို့သောအပြုအမူများနှင့်ဆက်နွယ်မှုနှင့်ဆက်စပ်သည်Microtus ochrogaster) Dev မှ Psychobiol ။ 2005; 47: 166-178 ။ [PubMed]
Olazabal DE, Young က LJ ။ မျိုးစိတ်နှင့်လူငယ်အမျိုးသမီး alloparental စောင့်ရှောက်မှုအတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှု oxytocin အဲဒီ receptor အဆိုပါ striatum အတွက်သိပ်သည်းဆနှင့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် septum နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ Horm ပြုမူနေ။ 2006a; 49: 681-687 ။ [PubMed]
Olazabal DE, Young က LJ ။ နျူကလီးယပ် accumbens အတွက် oxytocin receptors အရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles ထဲမှာ "အလိုအလျောက်" မိခင်အပြုအမူလွယ်ကူချောမွေ့။ neuroscience ။ 2006b; 141: 559-568 ။ [PubMed]
Paxinos, G, Watson ဟာ C. stereotaxic သြဒီနိတ်၌ကြွက်ဦးနှောက်။ စတုတ္ထ Edition ကိုပညာရေးဆိုင်ရာစာနယ်ဇင်း; San Diego မှ,, CA: 1998 ။
ရောဘတ် RL, Zullo တစ်ဦးက, Gustafson EA ၏, Carter က CS ။ Perinatal Steroid တစ်မျိုးကုသမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက် alloparental နှင့် Affiliate အပြုအမူပြောင်းလဲပစ်။ Horm ပြုမူနေ။ 1996; 30: 576-582 ။ [PubMed]
ရောဘတ် RL, Williams က JR, ဝမ် AK, Carter က CS ။ မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်သမဝါယမမွေးမြူရေးနှင့်မယား: အ sire ၏သွဇာနှင့်ပထဝီမူကွဲ။ Animation ပြုမူနေ။ 1998; 55: 1131-1140 ။ [PubMed]
Sansone ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း, Gerdes, CA, Steinman JL, Winslow JT, Ottenweller je, Komisaruk BR, Insel TR ။ ကြွက်များတွင်ကျောရိုးအတွင်း oxytocin Vaginocervical ဆွထုတ်။ Neuroendocrinology ။ 2002; 75: 306-315 ။ [PubMed]
Savaskan အီး, Ehrhardt R ကို, Schulz တစ်ဦးက, ဝေါလ်တာက M, Schachinger အိပ်ချ် Post ကို-သင်ယူခြင်း intranasal oxytocin မျက်နှာဝိသေသလက္ခဏာလူ့မှတ်ဉာဏ် modulates ။ Psychoneuroendocrinology ။ 2008; 33: 368-374 ။ [PubMed]
ဝမ် Z ကို, Young က LJ ။ မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာနှင့် montane voles အတွက်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် septum အတွက် binding oxytocin နှင့် vasopressin အဲဒီ receptor ၏ Ontogeny ။ ဦးနှောက် Res Dev မှဦးနှောက် Res ။ 1997; 104: 191-195 ။ [PubMed]
ဝမ် Z ကိုကူးတို့ CF, De Vries GJ ။ မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်ဖခင်၏အပြုအမူအတွက် septal vasopressin innervation ၏အခန်းက္ပ (Microtus ochrogaster) proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 1994; 91: 400-404 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Williams က JR, Catania KC, Carter က CS ။ အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်မိတ်ဖက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေး (Microtus ochrogaster): လူမှုရေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ Horm ပြုမူနေ။ 1992; 26: 339-349 ။ [PubMed]
ဝူက S, Jia M က, Ruan Y ကို, လျူ J ကို, Guo Y ကို, Shuang M က, Gong X ကို, Zhang က Y ကို, ယန် X ကိုတရုတ်ဟန်လူဦးရေအတွက်အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာအတူ oxytocin receptor မျိုးရိုးဗီဇ (OXTR) ၏ Zhang ကဃအပြုသဘောဆောင်သောအသင်းအဖွဲ့။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2005; 58: 74-77 ။ [PubMed]
လူငယ်တို့ LJ, Lim က MM, Gingrich B, Insel TR ။ လူမှုရေးပူးတွဲမှု၏ဆယ်လူလာယန္တရားများ။ Horm ပြုမူနေ။ 2001; 40: 133-138 ။ [PubMed]
Yrigollen CM, ဟန်အက်စ်အက်စ်, Kochetkova တစ်ဦးက, Babitz T က, Chang JT, Volkmar FR, Leckman JF, Grigorenko EL ။ အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာများအတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဗီဇအဖြစ် Affiliate အပြုအမူကိုထိန်းချုပ်ဗီဇ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2008; 63: 911-916 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]